Mandrangaranga ady amin’ireo mpino silamo ny Minisitra Paul Rabary - Madagascar Informations
29 avril 2017 3 mai 2017 Madagascar Informations Aucun commentaire
Tokony hiverina amin’ny teniny ny minisitra Paul Rabary ny amin’ny fanambarany fa ho hakatona avokoa ireo sekoly koranika eto Madagasikara koa raha izay no zava misy dia hisy fepetra ho raisin’izy ireo mpino silamo satria manakorontana ny mpino silamo ny fanapahan-kevitra noraisiny Minisitra.
Betsaka loatra hoy ireto mpino silamo ireto ny olana misy eto amin’ny firenena tokony ho vahana kanefa dia mamboly olana hafa indray ny minisitra Paul Rabary ka fanontaniana no napetrak’izy ireo hoe mpandinika fiaraha monina ny tenany sa mpankahala ny finoana silamo.
Ny taonjato faha 7 no nahatongavany teto amboniny tany ary efa azo lazaina fa finoana maneran-tany ,tsy misy tany tsy ahitana ny silamo I miliara 600 tapitrisa ireo mpino silamo amin’izao fotoana izao.
Tany amin’ny taonjato faha 9 no nahatongavany finoana silamo teto Madagasikara ka nitondrany ireo kolotora sy ny sivilizasiona silamo. Misy faritra eto Madagasikara izay tsy ahitana afa-tsy musulmana izay no midika fa tsy vahiny eto ny silamo satria izy ireo no finoana tonga teto voalohany ary efa hankalaza ny jobily faha 1200 taona nidirany silamo teto Madagasikara ny silamo.
Marihina hoy izy ireo fa samy manana ny safidiny amin’ny finoany harahiny ny olona tsirairay. Noho izany tsy loza mitatao ho an’ny fiaraha monina malagasy ny finoana silamo
← visite présidentielle à l’Usine Pêche et Froid de l’Océan Indien
PMU BET – Vola be no miandry ny mpilalao →
11 juillet 2018 Madagascar Informations 0
Un message d’alerte concernant le virus Zika crée la polémique
18 mai 2016 Madagascar Informations 0